Kulan looga hadlayay xoojinta ammaanka oo lagu qabtay degmada Balcad ee Gobolka Sh/dhexe
Mogadishu Arbaco 11 July 2012 SMC
Kulan looga hadlayay xoojinta ammaanka oo lagu qabtay degmada Balcad ee Gobolka Sh/dhexe.
Kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa ammaanka degmada Balcad ayaa maanta ka dhacay Warshadii Dharka ee degmada Balcad, kaasoo ay ka qeyb galeen Odayaasha dhaqanka, nabadoono iyo culumaa'udiinka degmadaas.
Kulankan oo ahaa mid uu soo qaban qaabiyay Hey'adda Wada hadalka bulshada ee CCD ayaa waxaa ka qeyb galay Saraakiil ka tirsan dowladda, Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe, kan maamulka degmada Balcad iyo Culumaa'udiinka Ahlusuna iyo Gudoomiyaha Hey'adda wada hadalka Bulshada Ciise Axmed Cumar
Ugu horeyn kulankan ayaa waxaa furay Gudoomiyaha degmada Balcad Cusmaan Maxamed Maxamuud (Xaadoole) oo sheegay in degmada tan iyo markii laga xoreeyay Shabaab ay dadka deegaanka ka qeyb qaateen nabadgelyada, isagoo tibaaxay inay u baahan yihiin wacyi gelin.
"Degmada nabada ka jirta waxaa ka qeyb qaatay dadka deegaanka, ciidamada amniga iyo AMISOM waxay suura geliyeen gacan ku heynta degmada iftiinka nabada ka jira degmada dadka deegaanka oo isugu jira Dhalinyaro, odayaal dhaqameed, haween iyo culumaa'udiin isugu jira ka wada qeyb qaatay"ayuu yiri Cusmaan xaadoole oo uga mahad celiyay Hey'adda CCD in degmada Balcad ay ku qabato kulankii u horeeyay ee is dhex galka bulshada iyo ammaanka lagu xoojinayo.
Gudoomiyaha degmada Balcad Cusmaan Xaadoole ayaa ugu baaqay Hey'adaha sama falka inay gar gaar la soo gaaraan degmada, isla markaana dadka deegaanka xilligii Al-Shabaab ka talinayeen ay u diideen awood ay beero ku fashaan, gar gaarkii sama falkana laga hor istaagay.
Sidoo kale waxaa ka hadlay kulanka Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Shabellaha Dhexe Yuusuf Cabdi Cabdulle (Yuusuf Jaalle) oo sheegay in degmada Balcad la qabtay maalin taariikh ku xusan oo ku beegan 26-ka June, xilligii Calanka Soomaaliya la saaray, waxaana uu tilmaamay inay muhiim tahay in dadka deegaanka ka qeyb qaataan howlaha maamulka, ammaankana ka shaqeeyaan.
Mr Yuusuf Jaalle ayaa sheegay in maalintii ay yimaadeen degmada ka shaqeynayeen sidii maamulka deegaanka u dhisi lahaayeen, isla markaana haatan saldhiga booliska uu furan yahay, maxkamada degmadana ay shaqeyneyso sida uu yiri.
Waxaa uu ugu baaqay Hey'adda CCD inay kaalin ka qaadato wacyi gelinta iyo baraarujinta bulshada, isagoo ka dalbaday inay dadka tusaan midnimada, waxaana uu intaa ku daray in dhamaan degmooyinka Gobolka Shabellaha Dhexe dhowaan loo ruqaansan doono.
Taliyaha Guutada 1aad Jen. Maxamed Maxamuud Saney ayaa sheegay in aanay qaris aheyn waxa ay bulshada u qabato Hey'adda CCD, waxaana uu tibaaxay in barnaamijka ay hey'adda ku qabaneyso degmada Balcad uu yahay kii u horeeyay, isla markaana ay rajeynayaan inay ku qabtaan deegaanada kale ee Shabellaha Dhexe.
"Degmada Balcad waa degmadii u horeysay ee wada tashi dadka deegaanka u qabtaan, Hey'adda CCD waa hey'ad waxqabad leh, waxaan ka rajeyneyna inay marka la xoreeyo, Jowhar, Mahadaay, Aadan Yabaal, Raage Ceele iyo Cadale marka la xoreeyo ay howlo ka qaban doonto"ayuu yiri Jen. Saney.
Waxaa uu ugu baaqay shacabka in aanay ka cabsan kooxaha nabadiidka ee nafsadooda la cararay, waxaana uu ku amaanay dadka deegaanka sida ay u beeniyeen hanjabaadihii ay shacabka u jeedinayee, isagoo intaa ku daray qof walba xornimo u shaqeysan doono, caruurtana waxbarashadooda ay heli doonaan.
Sheekh C/qaadir Soomow oo ah Afhayeenka Ahlusuna Wal-jameeca ayaa sheegay in shacabka Balcad loo baahan yahay inay is garab taagan ciidamada qalabka sida, isagoo u mahadceliyay ciidamada guulaha ay soo hoyeen.
Waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay 100% ay muslim yihiin, waxaana uu xusay diinta aan laga been sheegin, dadkana la fasaahaadin, waxaana uu cadeeyay in Balcad ay aheyd deegaanadii saldhiga u ahaa dariiqada suufiyada.
Gudoomiyaha Maxkamada degmada Balcad Sheekh Cusmaan Xidig oo ka hadlay diinta Islaamka waxa ay ka qabto dilka qof Muslim ah ayaa ku sifeeyay mid aan diinta Islaamka raad ku laheyn, isla markaana ay tahay arrin uu alle xarimay in qof Muslim ah dhigiisa la baneysto
Si kastaba ha ahaatee kulankan ballaaran ee looga hadlayay xoojinta ammaanka degmada Balcad ayaa noqonaya kii labaad Muddo todobaad ah ay Hey'adda CCD ku qabato degmooyinkii dhowaan ay xoreeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.